Global Voices teny Malagasy » “Rehefa tsy hamaha ny olana ireo orinasa vaventy momba ny teknolojia. Isika ihany no hamaha azy.” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Mey 2019 11:40 GMT 1	 · Mpanoratra Kọ́lá Túbọ̀sún Nandika avylavitra
Sokajy: Nizeria, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Ny Tetezana - The Bridge
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Navoaka ity andrana manaraka ity ho ampahany amin'ny fanentanana anaty media sosialy  hampiroboroboana ny fahamaroan'ny teny ety anaty aterineto niarahana tamin'ny Rising Voices. Andrana natsangana avy amin'ireo andiana bitsika natambatra izy ity, nampiasàna ny fampiasa Thread Reader  ary nalamina sy narafitra ho an'ny famoahana.
Notantaraiko ny tranga iray niseho indray mandeha izay , teny amin'ny milina ATM / GAB mpitsinjara vola iray tao an-tànanan'i Lekki, izay nisy tovolahy iray manodidina ny 30 taona teo tsy nahay izay tian'ilay milina nambara tamin'ny hoe tsy afaka manome vola ‘tsy ankasa amin'ny 500′ na ny toy izany ilay izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/23/139239/
 fanentanana anaty media sosialy: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/03/18/celebrating-african-linguistic-diversity-online-through-a-rotating-twitter-account/
 fampiasa Thread Reader : https://threadreaderapp.com/thread/1109405337877127168.html
 Notantaraiko ny tranga iray niseho indray mandeha izay: https://www.facebook.com/search/top/?q=Kola%20Tubosun%20multiples%20of&epa=SEARCH_BOX